Wasiir katirsan Puntland oo beeniyay in Imaaraatka Carabta ay joojiyeen taageeradii ciidamada PMPF - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiir katirsan Puntland oo beeniyay in Imaaraatka Carabta ay joojiyeen taageeradii ciidamada PMPF
April 15, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ciidanka PMPF oo tababar ku jira. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Isutaga Imaaraatka Carabta ayaan joojin taageeradii ay siin jireen ciidamada Puntland ee PMPF, sida uu sheegay wasiir.
Wasiir katirsan Puntland, oo magaciisa ka gaabsaday, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in warka sheegaya in Imaaraatka ay joojiyeen taageerada PMPF ay tahay been.
Masuulka ayaa intaas ku daray in Puntland ay si dhaqso ah u jawaabi doonto.
Sabtidii, qaar katirsan tababarayaal Imaaraat Carabta katirsan ayaa dib ugu noqday dalkooda, inkastoo warbaahinta maxaliga ah ay ku warantay in tababarayaashu ay ka baxeen Puntland kadib amar ka yimid Dubai.
Ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa kamid ah kuwa ugu tababarka fiican Puntland. Waxay kaalin muhiim ah ka qaateen howlgalada ka dhanka ah burcadbadeeda, haddana waxay la dagaalamayaan maleeshiyada Al-Shabaab ee buuraha Galgala.
Garoonka diyaaradaha caalamiga ee Garoowe oo si rasmi ah loo furi doono dhawaan
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso maanta oo Jimce ah. Gaari noociisu ahaa Toyota Propox oo siday arday dhigta dugsi sare oo kuyaala magaalada [...]